Filtrer les éléments par date : jeudi, 14 janvier 2021
jeudi, 14 janvier 2021 21:06
Pilo kely : Zao fotsiny e, tsy misaraka ny volamena, kidnapping, trafic devise, blanchiment d'argent, jet privé, banky, casino, varotra electronika.
Eny an-tsefatsefany eny ny rongony sy ny sexe ary ny basy.
Te ahita iza no tompon'ny volamena, tadiavo iza no mpanao devise sy kidnapping dia hitanao ny valiny.
Mandeha etsy amin'ny Arcade ianao dia mahazo valiny, mividy volamena e, misy euro? Miazakazaka tsy lavitra eo izy dia mitondra izay ilainao rehetra, ary fifampitokisana tsy mandray ny entana avy aminao izy raha tsy efa voahisanao ny anao.
Miala etsy Analakely ianao dia misy betsaka koa etsy Antsahavola, miara-mihidy amin'ny banky izy, efa pirina kely sisa no hitanao amin'ny lera hikatonan'ny banky na mangazay mpivarotra elektronika.
Ny bizina fanafody etsy Ambohipo moa dia ny building Miami sisa no tsy hitanao mijoro eny, fa tsisy bedy io, ka na ny dokotera aza eny no matsaka na maniraka ny marariny, ka mora sy maro koa ny azy ka, fa ny ao ambadiky Sahondra mba inona?
Tafandria mandry fa be film be amin'ny télé.
jeudi, 14 janvier 2021 19:29
Kitra : Hisy “Tournoi La relève - Doritos” ho an'ireo 14-15 taona
Hotanterina manomboka ny 7 feboary 2021 izao ny “Tournoi La relève- Doritos” ho an'ireo 14-15 taona. I Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena amin’ny baolina kitra no ho ray mpiahy ny fifaninana, iarahana amin’ny orinasa Aldis izay mpivarotra ny vokatra Doritos.
64 ny klioba hifaninana, hozaraina anaty vondrona 8. Ny klioba 2 voalohany isaky ny vondrona no tafakatra amin’ny dingana 1/8-ndalana.
Vinavinaina hatao ao amin'ny Kianja Barea Mahamasina ny lalao famaranana ny volana novambra 2021.
Hanomboka ny 14 janoary, ary hitohy hatramin'ny 22 janoary 2021 ny fisoratana anarana, ary maimaimpoana.
Miara-miasa amin'ny fanatontosana an'ity fifaninana ity ny Vaomiera kitra ho an’ny tanora avy ao amin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra sy ny ligy Analamanga.
jeudi, 14 janvier 2021 18:40
INSTAT : Mitaraina ireo mpiasa "de droit privé"
Sady mitaraina ireo mpiasa "de droit privé" ao amin’ny INSTAT no mangataka ny mba hijerena manokana ny momba azy ireo.
Misy ny tsy fitoviana eo amin’ny fitantanana ny mpiasa kanefa dia mitovy tanteraka amin’ny an’ireo mpiasa-mpanjakana (fonctionnaires) ihany ny asa rehetra sahanina.
Tsy nisitraka ny fiakaran-karama 13 % izay nolaizan’ny filoham-pirenana, namafisin’ny didim-pitondrana 2020-006 ny 10 janoary 2020, izy ireo.
Tsy mahazo "remboursement des frais médicaux" sady tsy misitraka ny tombotsoa amin’ny CNaPS satria mbola tsy voaloan’ny tompon'andraikitra ny latsakemboka.
Tsy misitraka ny "poste budgétaire" na "remplacement numérique" izy ireo nanomboka ny taona 2015 kanefa ny mpiara-miasa teo aloha dia nisitraka izany.
Efa mihoatra ny enina taona farafahakeliny, ary telopolo taona farafahabetsany no niasan’ireo mpiasa "de droit privé" ireo tao amin’ny INSTAT.
Tanambao Verrerie-Toamasina : Trano 18 tafo kilan’ny afo
Nitrangana haintrano tao Tanambao Verrerie androany maraina. Olona nampirehitra afo maraina, tamina tokantrano iray, tsy voafehy no niandohan’ny firehetana.
Trano 18 tafo no kila. Niditra an-tsehatra namono ny afo ny mpamono afon’ny tanànan’i Toamasina.
jeudi, 14 janvier 2021 17:53
jeudi, 14 janvier 2021 16:17
Fiadidiana ny Repoblika : Nanangana rafitra hanara-maso sy hanenjehana ireo mpanao hosoka
Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana mametraka eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika ny ANAF, na ny Agence Nationale Anti-Fraude, mba hanaraha-maso ireo hosoka sy hanenjehana ireo mpanao hosoka araka izay voafaritra ao anatin’ny lalàna.
Hanao ny fanadihadiana rehetra manodidina ireo hosoka rehetra ny ANAF, ary hiara-hiasa akaiky tanteraka amin’ireo sampan-draharaham-panjakana mahefa mpampihatra ny lalàna araka ny fahefana nomen’ny lalàna azy ireny.
jeudi, 14 janvier 2021 16:09
Volamena 73.7kg : Napetraka mialoha tao anaty fiaramanidina ireo volamena hoy ny ladoany
Nanizingizina ny teo anivon'ny fadin-tseranana fa napetraka mialoha tao anaty fiaramanidina ireo volamena saika ahondrana tany Afrika atsimo. Mbola mitohy ny fanadiadiana.
jeudi, 14 janvier 2021 13:08
Covid-19 : Vita vaksiny ny Papa François sy Benoît XVI
Nanomboka ny 13 janoary 2021 ny hetsika fanaovam-baksiny fanefitry ny Covid-19 ao Vatican. Efa samy nahazo anjara daozy voalohany avy ny Papa François sy ny Papa émérite Benoît XVI, androany maraina ity farany no vita vaksiny.
jeudi, 14 janvier 2021 13:04
Ankazobe : Rakotoarisoa Rasoava Rija Jean no depiote vaovao
Namoaka ny didy (Arrêt n°02-HCC/AR) ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny 12 janoary 2021 mamaritra ny fahabangan-toerana sy manolo ny depiote Ankazobe taorian’ny nahafatesan’ny tompon-toerana, Ralalason Dera Harinjafimino.
Araka io didy io dia Rakotoarisoa Rasoava Rija Jean no handray ny toeran’ny depiote Ankazobe eo anivon’ny Antenimieram-pirenana. Mpisolo toerana avy amin’ny lisitra IRMAR tao amin’ny fari-pifidianana Ankazobe ity farany.
Nodimandry ny 1 janoary 2021 tao amin’ny hopitaly CHU Anosiala, Kaominina Anosiala, Distrika Ambohidratrimo, Ralalason Dera Harinjafimino.
jeudi, 14 janvier 2021 13:02
Ihosy : Mong Mann Bismark Jean no depiote vaovao
Namoaka ny didy (Arrêt n°03-HCC/AR) ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny 12 janoary 2021 mamaritra ny fahabangan-toerana sy manolo ny depiote Ihosy, Faritra Ihorombe taorian’ny nahavoafidy ho Senatera ny tompon-toerana, Rakotomamonjy Neypatraiky André.
Araka io didy io dia i Mong Mann Bismark, mpisolotoerana avy amin’ny lisitra «Indépendant Patraiky Managnandro» tao amin’ny fari-pifidianana Ihosy, no handray ny toeran’ny solombavambahoaka Ihosy Faritra Ihorombe ao amin’ny Antenimieram-pirenena.